Sara Ali Khan Inaysan Aamir Khan La Sameyn Doonin Filimka Thugs Of Hindostan Yaa Sabab U Ah - Hablaha Media Network
Sara Ali Khan Inaysan Aamir Khan La Sameyn Doonin Filimka Thugs Of Hindostan Yaa Sabab U Ah
HMN:- Waxaa siweyn la isla dhex maraayay gabadha dhalinta yar Sara Ali Khan ee Saif Ali Khan aabo u yahay inay Aamir Khan la sameyn doonto filimka Thugs Of Hinduston.
Balse haatan waxaa la sheegay in Sara filimka Thugs Of Hinduston sameyn doonin waxaana sabab u ah in mashruucaan weyn gabadhaan weyso filim sameeye Aditya Chopra.
Waxaa la sheegay in xafiiska ugu weyn shirkada Yash Raj Films Sara Ali Khan loogu yeeray si looga qaado tijaabo ku aadan inay filimka Thugs Of Hinduston sameyn karto.
Balse Aditya Chopra lama dhicin tijaabadii uu Sara ka qaaday madaama ay wax walbo ficil ahaan u sameyn waasay qaabka uu Aditya rabay sidaas ayayna ku weesay inay filimka weyn Thugs Of Hinduston Aamir Khan la sameyso!
Sara Ali Khan sidoo kale waxaa lala xariirinaa in filimka Student Of The Year 2 la sameyn doonto Tiger Shroff iyo Disha Patani balse weli warkaan lama xaqiijin.
Sidaa darteed Sara Ali Khan oo diyaar u ah inay Bollywoood-ka kusoo biirto weli ma aysan heli mashruuc si rasmi ah loogu dhiibo oo ay nasiibkeeda ku tijaabiso.